Dhacdooyinka MHS | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Polar Plunge waa baraf baraf ah oo u gudubta harada Minnetonka ee Bayview ee ku taal Excelsior. Saxiix khadka tooska ah si aad u keydiso $ 5. Keen shukumaan, beddel dharka oo xiro dharka dabbaasha. Hubso inaad ku hubiso ardayga Minnetonka, macallinka, ardayda ka qalin-jabisay ama xubin ka tirsan bulshada foomka diiwaangelinta si aan ugu helno sumcad dhammaan dadka "Tonka Tough"! Xusuusnow, 10-kii qof ee boodaya, ALARC waxay ugu deeqi doontaa $ 100 Saaxiibbada Qoyska ee Minnetonka Toddobaadka Qoyska.
Jacaylka macaan waa jacaylka maalinta Jacaylka, kaas oo ka horreeya Toddobaadka Wadnaha. Wax badan oo la mid ah Toddobaadka Ruuxa ee Soo-noqoshada, Toddobaadka Wadnaha waxaa ku jira maalmo labbiska iyo maalin ay ardaydu ka qaybgalaan dhacdooyinka sida Man Pageant, Ultimate Frisbee iyo nashaadaad kale oo xiiso leh. Lacagta lagu aruuriyay dhacdooyinkan waxay taageertaa ururada maxaliga ah, kuwa aan macaash doonka ahayn. Qoob-ka-ciyaarka 'Sweethearts' ayaa u gaar ah xaqiiqda ah in gabdhaha lagu dhiirrigeliyo inay weyddiistaan la-hawlgalayaashooda qoob-ka-ciyaarka halkii ay ka ahaan lahaayeen.
Prom dhaqan ahaan qaadataa meel on mid ka mid ah habeenkii ugu horeysay Friday ee May. Dhammaan ardayda yaryar iyo kuwa sare waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb galaan. Ardayda cusub iyo ardayda dhigata fasalka labaad ayaa laga yaabaa inay kaqeyb galaan qoob ka ciyaarka yar ama weyn. Tani waa qoob ka ciyaar rasmi ah oo taariikhi ah Ka eeg faahfaahinta Prom bogga MHS .
Talent Show waa qaab ah in qaab Dugsiga Sare Minnetonka ay ugu kartida iyo madadaalinta dadka iyo kooxaha si ay dugsiga iyo bulshada. Kaqeybgalayaashu waxay tijaabinayaan aqbalitaanka kadibna waxay qabtaan halyeeyadooda iyo kartidooda hal ama laba habeen.
Dowladda Ardayga /